Warbixin: Sharciga Warbaahinta | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Sharciga Warbaahinta
Hordhac - Warbaahintu waa adeeg daruuri u ah bulshadda, waxtar weyna u leh, Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa: “War la helaa, talo la helaa” murti kale oo Soomaliyeed waxay leedahay: “Muslimow run sheeg, Muslimow ka rumayso”.
Xikmado kale oo badan oo ku jira dhaqanka iyo saxaafadda Soomaalidu, waxay u jeedaan in beenta iyo been abuurka laga dhowro warbaahinta, oo had iyo jeer la faafiyo warar xaqiiqada ku salaysan.
Warbaahinta run sheega ku dhisan waa mida u adeegaysa kobcinta dimuquraadiyadda, xuquuqul insaanka, horumarinta dalka iyo hirgelinta mabaadidada ku dhisan cadaaladda.
Saxaafadda iyo warbaahintu maadaama ay yihiin wax u adeegaya dadweynaha waa inay ahaadaan qaar leh xeer iyo xeer nidaam, oo aysan ku xadgudbin xuquuqda muwaadiniinta, hay’addaha iyo dawlad da toona.
[PDF] - Halkaan ka Aqriso Xeerka Saxaafadda: Halkaan Guji
NUSOJ, Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ka hadlay Sharcigaan ayaa sheegay in Dowladda ay meel marisay Sharci qabyo Qoraal ah.
War uu Ururku soo saaray Shalay (Jumco) ayuu ku sheegay in Sharciga uu Qabyo yahay, ayna ku jiraan Qodobbo dhowr ah oo ka hor imaanaya xoriyadda Saxaafadda iyo Madax bannaanida Saxaafadda gaarka loo leeyahay.
Sharciga Cusub ayaa waxaa uu meesha ka saaraya Madaxbannaanida Golaha saxaafadda Qaranka, waxaana Wariyaasha u shaqeeya Wakaaladaha Wararka lagu xanibayaa Shaqadooda.
“Waan u gudbinay talooyinkii suxufiyiinta iyo bahda saxaafadda wasiirka warfaafinta waxaana nasiib darro ah in sharci sidaani u xanibaya saxaafadda la soo saaro (...) Soomaaliyada cusub ee ku dhisan sharciga iyo cadaaladda ma aha in loo horseedo caburinta xoriyadda saxaafadda iyo in xanibaado lagu soo rogo xoriyatul-qowlka" ayuu yiri Cumar Faruq Cusmaan, Xoghayaha guud ee NUSOJ.
Sharciga Halkaan ka Aqriso - Halkaan Guji